Uzo isii iji nweta ihe kacha mma na Spotify na smartphone gi | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | software, Nkuzi
Spotify abụrụla ihe dị oké mkpa na ndụ ọtụtụ nde ndị ọrụ. Ekele ya anyị nwere ohere ịnweta nde nde, nke enwere ike ịnweta ma na ụdị desktọọpụ na nke smartphone. Ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịnwe akaụntụ na nkwanye ugwu, n'agbanyeghị na ị nwere ike ọ gaghị enweta ọtụtụ uru na akaụntụ ahụ.
Luckily, e nwere ọtụtụ aghụghọ anyị nwere ike iji iji nweta ọtụtụ ihe na Spotify. N’ụzọ dị otu a, anyị ga - eji usoro nkwanye ugwu ka mma n’ekwentị anyị. O doro anya na e nwere ụfọdụ aghụghọ bara uru maka gị.
1 Nchọta ziri ezi karị
2 Gụgharia ogo na Spotify
3 Ichekwa data
4 Ngụ oge ịkwụsị egwu
5 Clear cache na Spotify
6 Gbochie nka
7 Lee egwu nke egwu a
8 Lelee obere vidiyo
Nchọta ziri ezi karị
Ndepụta egwu dị na Spotify buru ibu, nke ahụ bụ ihe anyị maara. Yabụ, ọ nwere ike bụrụ na ụfọdụ oge anyị chọrọ ime nyocha doro anya na ngwa ahụ. Anyị nwere ikike ịchọ egwu dabere n'ụkpụrụ dị iche iche na ya, maọbụ n'afọ ekwuru na abụ ma ọ bụ ọba wepụtara, ma ọ bụ ụdị a. Yabụ, ọ bụrụ na anyị nwere mmasị n'ụfọdụ ụdị egwu, anyị nwere ike ịchọta egwu ahụ n'ụzọ dị mfe. Naanị anyị ga-eji ụfọdụ okwu ọchụchọ:
Afọ: Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọta egwu sitere na otu afọ, anyị nwere ike ịme ya na-enweghị oke nsogbu. Naanị ihe anyị ga - ede na Spotify bụ "afọ: 2010" na - esote ọ bụla, ebe m tinyere 2010 naanị ị ga - etinye afọ ahụ masịrị gị. Anyị nwekwara ike ịchọ ọtụtụ afọ, nke ga - abụ "afọ: 2007-2017".
Okike: Anyị nwere ike chọọ ịchọ abụ ndị dabere na ụdị egwu ahụ, n'echiche a bụ echiche bụ otu ihe ahụ maka afọ ahụ, ka anyị wee nwee ike ịbanye "ụdị: rock" na Spotify wee pụta nsonaazụ dabere na ụdị a
Artist: Ọ bụrụ na anyị nwere mmasị n'ịchọ egwu sitere n'aka otu onye na-ese ihe, anyị kwesịrị ịgbaso otu usoro ahụ anyị jiri ruo ugbu a "omenka: aha njirimara".
Ndekọ ndekọ: Site na oke a, anyị nwere ike ịchọta egwu niile ebipụtara n'okpuru otu ụlọ ọrụ ndekọ aha. Ọ nwere ike ịmasị ụfọdụ ụlọ ọrụ ndekọ aha.
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike ịme ụfọdụ searches na-enye anyị ọzọ na-akpali results maka anyị n’oge niile. Ọ bụ ezigbo ụzọ iji chọpụta egwu anyị hụrụ na Spotify.
Ego ole ka Spotify na-eri?
Gụgharia ogo na Spotify
Mgbe anyị na-ege egwu na ekwentị, anyị chọrọ ka ọ bụrụ nke kacha mma. Ọ bụ ezie na a ghaghị iburu n'uche nke ahụ elu àgwà nke music na Spotify ga-eri ọzọ dataYa mere, ọ ka mma ịnwe nhọrọ a naanị mgbe anyị jikọtara na netwọk WiFi. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ka anyị hụ ka ọnụego anyị si eri ngwa ngwa (belụsọ na ịnwere ọnụego na-akparaghị ókè). Na nke a ị nwere ike nzọ na nhọrọ a.
Iji gbanwee ogo iyi, na-ahọpụta nke kachasị elu, anyị ga-aga nhazi ahụ. Anyị na-eme nke a site na ịpị akara ngosi cogwheel dị n'elu aka nri nke ihuenyo ahụ. N'ime nhazi anyị ga - eme naanị slide ruo mgbe ị ruru gụgharia àgwà ngalaba. N'ebe ahụ ka anyị na-ahọrọ ogo kachasị elu, maka ahụmịhe ka mma mgbe anyị na-ege egwu n'elu ikpo okwu.
O di nwute, enwere ike ịhọrọ oke kacha mma bụ ihe fọdụrụnụ edebere maka ndị ọrụ nwere akaụntụ adịchaghị na Spotify. Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ a, ịnwere ike ịkpọ egwu na akpaka, nke na-abịa na ndabara na akaụntụ ahụ.
Spotify bụ ngwa nke na-eri ọtụtụ data na ekwentị, nke a bụ ihe anyị maara, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị nwere egwu dị elu, dịka na ngalaba gara aga. Ikekwe n'otu oge ị chọrọ iri obere ihe, dị ka mgbe ọnụego gị dị nso na-emefu. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ị nwere ike ịgbalite data ịchekwaa na ngwa.
Chekwa data pụtara na ogo egwu ga-adị ala, na-ewe obere data mkpanaaka. Iji rụọ ọrụ ya anyị tinye Spotify nhazi. N'ime ya, anyị na-ahụ nchekwa data dị ka ngalaba nke mbụ. Nanị tụgharịa mgba ọkụ enwere, nke mere na ọ na-arụ ọrụ na ngwa ahụ. Mgbe anyị chọrọ ịkwụsị iji ya, anyị ga-agbanyụ ya.
Ngụ oge ịkwụsị egwu
Ọ bụ ọrụ kacha ọhụrụ na ngwa ahụ ewebatala. Spotify na-enye anyị ohere n'ụzọ dị otú a ịmebata oge ịgba nke mere na egwu ahụ ga-akwụsị, ya bụ, anyị nwere ike ịrịọ ngwa ahụ ka ọ kwụsị ịkpọ egwu n’ime nkeji ise. Ọrụ nke nwere ike ịba uru maka ndị na-ege egwu mgbe ha na-ehi ụra, dịka ọmụmaatụ. Nke mere na ọ dịrị ha mfe ihi ụra, na-enweghị nchegbu gbasara ịkwụsị ngwa ahụ.
Mgbe anyị na-ege egwu, anyị ga-aga na ihuenyo "Ugbu a na-egwu egwu" wee pịa menu. Otu n'ime nhọrọ dị na njedebe bụ oge ụra. Anyị na-ahọrọ ebe a oge kachasị amasị anyị nke ukwuu, site na minit 5 ruo otu awa. Ya mere, anyị etinyeworị oge a na Spotify ma anyị nwere ike ihi ụra na udo nke uche zuru oke.
Clear cache na Spotify
Ọ bụrụ na ị na-eji Spotify ugboro ugboro na gam akporo ekwentị gị, ị nwere ike ịchọpụta na ị mechaa chịkọbara nnukwu oghere. Nke a bụ ihe na-ejedebe na-ewe ọtụtụ ohere na ekwentị gị, na maka ndị nwere ekwentị nwere ntakịrị ncheta nwere ike ibu oke. Yabụ, enwere ike ihichapụ oghere na ngwa ahụ. Ya mere weputara ohere na oge ahụ.
Anyị kwesịrị ịbanye ntọala Spotify. N'ime ya na ị ga-slide ka cache ngalaba na pịa ebe ahụ ihichapụ oghere. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ehichapụ ya, na-ahapụ ntakịrị ohere na ekwentị. Maka ọtụtụ ndị ọrụ ọ nwere ike inye aka.
N'ikpeazụ, anyị nwere ọrụ ọzọ kachasị ọhụrụ abanyela na Spotify. O kwere omume na enwere onye omenkà ị na-enwekarị ihe ntụrụndụ. Iji mee ka ihe ka njọ, site n’oge ruo n’oge egwu ha na-apụta na mgbasa ozi ma ọ bụ na-atụ aro na ngwa ahụ, nke na-ewe iwe. Ọ dabara, enwere oru nke igbochi, nke ahụ kwuru na onye na-ese ihe na-akwụsị ịpụta na ngwa maka gị.
Tozọ iji ọrụ a dị mfe. Anyị kwesịrị chọọ onye na-ese ihe na ajụjụ ma tinye profaịlụ ya na Spotify. N'elu ihuenyo ahụ, na-esote bọtịnụ na-eso, akara ngosi atọ kwụ ọtọ, nke anyị ga-pịa. Ọtụtụ nhọrọ ga-apụta, otu n'ime ha bụ igbochi. Naanị anyị ga-pịa nhọrọ a. N'ụzọ dị otú a, onye na-ese ihe kwuru ga-apụ n'anya anyị na ngwa ahụ.
Lee egwu nke egwu a
Ihe ngosi nke di na Spotify oge bụ ịhụ lyrics nke egwu. Mgbe anyị na-ege egwu, anyị nwere ike ịhụ ihe egwu abụ a kwuru bụ, nke nwere ike ịmasị n'ọtụtụ oge (anyị na-amụ asụsụ ahụ, anyị anaghị aghọta ederede ederede nke ọma, wdg). Luckily, na ngwa nwere ndị dị otú ahụ a atụmatụ dị. Gịnị ka anyị kwesịrị ime na nke a?
Mgbe anyị na-ege egwu ụfọdụ na ngwa ahụ, anyị ga-pịa na ogwe ị na-ege na ala nke ihuenyo. Ya mere, anyị ga- gbadaa, iji nwee ike ịhụ egwu nke egwu ahụ, yana akụkọ ụfọdụ gbasara ya. N'ime usoro dị mfe anyị nwere ịnweta ozi a, dịka ị pụrụ ịhụ.
O di nwute, buru n'uche nke ahu ọ bụghị egwu niile dị na Spotify na-enye anyị ohere a. Ọ bụ a mmekota na Genius, nke bụ a website ebe anyị nwere ike ịhụ lyrics nke nde songs. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka ederede ederede. Maka ụfọdụ egwu, ọkachasị ọ bụrụ na ọ dị ọhụụ, enwere ike ghara ị wepụta ya. Nakwa na ndị na-ewu ewu na-ewu ewu na ọ nwere ike ime na ọ nweghị ihe ọ bụla.
Lelee obere vidiyo
A atụmatụ na dị na adịchaghị version nke Spotify bụ ịhụ vidiyo nke abụ. Naanị anyị ga-eji nyocha ọchụchọ na ngwa ahụ n'onwe ya iji chọta vidiyo ndị a. Na mgbakwunye na obere vidiyo, anyị na-achọta ọdịnaya ndị ọzọ na nkebi nke ngwa a. Enwere akwụkwọ akụkọ, vidiyo na ịmepụta egwu ma ọ bụ vidiyo, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere, ha bụ ụzọ dị mma iji nọrọ na ntanetị na ọtụtụ ndị na-ese ihe.
Nnọọ na ị ga-emeghe ngwa na gị gam akporo ekwentị na-abanye na search engine. Ebe ahụ, i nwere slide ka videos, ebe anyi banyere na ngalaba ahu. N'ebe a, anyị ga-enwe ike ịhụ ihe niile dị n'ime ọdịnaya. Enwere ike igosi ihe ngosi ma ọ bụ ngosipụta ngosipụta, nke nwere ike ịmasị anyị n'oge ahụ. Dị mfe iji nweta ma nwee nnukwu ọdịnaya vidiyo n'ụzọ dị otu a. Ọ bụ ezie na icheta, ọ bụ ọrụ dị maka ndị ọrụ ahụ nwere akaụntụ adịchaghị na Spotify.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Aghụghọ iji nweta ọtụtụ ihe na Spotify na ama gị